Wax badan ka Ogow Sababta dowlada Hindiya ay u dooneyso inay xirto Daaciga Zaki Naik. ⋆ Soomaaliweyn | Wararka Iyo Warbixinada Dalka | Somalia's Latest News
Home Wararka Wax badan ka Ogow Sababta dowlada Hindiya ay u dooneyso inay xirto...
Wax badan ka Ogow Sababta dowlada Hindiya ay u dooneyso inay xirto Daaciga Zaki Naik.
Waxaa bartiisa facebook ku tixan dad gaaraya 16 milyan; twitter-kiisa 150,000, wuxuuna jeediyay ku dhawaad 4,000 oo muxaadarooyin ah kuna saabsan diinta Islaamka dunida oo dhan. Hayeeshe, Zaki Abdulkarem Naik, oo ah daaci iyo seynisyahan Muslim Hindiyan ah, waxaa hadda ku raad-joogta oo dooneysa dowladda Hindiya.
Taniyo markii Xisbiga BJP Party oo uu hoggaamiyo Narendra Modi uu xilka ku fariistay, waxaa aad u kordhay cadaadiska lagu hayo tirada Muslimiinta ah ee Hindiya ku nool.
Zaki Naik oo ah shaqsiga ugu caansan Muslimiinta ku nool bar-qaareedka Hindiya waa bartilmaameedka koobaad. Taniyo markii uu dhacay weerarkii maqaaxi ku taalla caasimadda Dhaka ee Bangladesh lagu qaaday, daacigan waxaa lagu suntay inuu si hoose uga danbeeyey falkaas.
Kooxihii falka geystay ayaa ku andacooday inay ka shidaal-qaateen khudbadaha oo wadaadku ka jeediyo isku-imaatinka looga hadlayo Islaamka iyo argagaxisada. Dowladda Bangladesh ayaa markaas waxay hawadeeda ka saartay fogaan-aragga Peace Tv oo uu aas-aasay Zaki.
Dowladda Hindiya ayaa iyada oo cuskanaysa dhowr dhacdo oo midda oo kale ku saabsan, waxay daacigan ku tilmaantay mid faafinaya ereyo naceyb ka dhex abuuraya bulshooyinka kala diimaha ah. In kasta oo Zaki Naik uu sheegay inuusan marnaba ku boorin in dad aan waxba galabsan la iska laayo micno la’aan, haddana Hindiya ayaa ugu yeertay inuu kusoo laabto dalka si su’aalo looga weydiiyo eedeymaha loo heysto.
President of the Islamic Research Foundation Zakir Naik delivers a speech at an “Islamaphobia” conference in Istanbul, Turkey, on March 23, 2017. (Salih Zeki Fazlioglu/Anadolu Agency/Getty Images)
Machadka Baarista Islaamka ee IRF oo uu wadaadkani aas-aasay sannadkii 1991 ayaa albaabada la iskugu laabay. Xarunta fogaan-araga Peace Tv oo ku taalla Dubai, ayaa hadda heli karta madax-bannaani dhinaca fara-gelinta ah oo kaga timaada dowladaha Hindiya iyo Bangladesh.
Isaga oo ka hadlayay eedeymaha la sheegay in loo heysto, wuxuu muuqaal fiidiyow ah oo uu soo diray ku yiri; “Tani ma ahan dagaal aniga iga dhan ah, waa dagaal lagu hayo Muslimiinta Hindiya, nabadda, dimuqraadiyadda iyo xurriyadda hadalka. Kashi-ful-Hudda, oo ah tifaf-tire ka ah TwoCircle.net oo ah mareeg si gaar ah u faaqida xaaladda ay ku nool yihiin Muslimiinta Hindiya ayaa qaba in Zaik loo bartilmaameedsanayo maadaama uu yahay Muslim.
“Waligiis maanu ku wacdin qalalaaso iyo rabshado. Khudbadihiisu waxay ahaayeen kuwo furan oo la fahmi karo,” ayuu yiri. Afhayeenka Xisbiga BJP ayaase taasi ku gacan-seyray isaga oo ugu yeeray daaciga inuu usoo diyaar-garoobo ka fal-celinta eedeymaha loo jeediyay haddii uusan qabin wax tuhun ah.
Daaciga ayaa taniyo sannadkii 1990 wuxuu kusoo jiray faafinta dacwada diiniga ah ee Islaamka. Balse tani ayaa hadda gelinaysa saadaal aanu jecleysan oo la xiriirta mustaqbalkiisa iyo dhaxalkii uu muddo badan soo waday.
“Naik maadaama uu yahay udub-dhexaad ka dhex muuqda Muslimiinta Hindiya, waa bartilmaameed sahlan,” ayuu yiri Mohammed Reyaz, oo bare ka ah Jaamacadda Aliah ee Kolkatta. “Xaalku wuxu marayaa hadda in si toos ah loogu soo bareero si loo aamusiyo.”
Qore: Zakariya Xasan Maxamed. Kala xiriir:
Previous articleGaaskii ugu badnaa abid oo laga helay Deegaan ay Soomaali leedahay
Next articleFBI-da Mareykanka oo Dacwad kusoo oogtay Nin Soomaali ah oo lasoo shaqeeyay